Albaabka albaabka garaashka daboolaya furitaanka ugu weyn ee gurigaaga, albaab dahaaran ayaa kaa caawin doona yareynta wareejinta kuleylka ama hawo qabow garaashkaaga. Tani waxay muhiim u tahay dhowr sababood:
(1) Haddii garaashkaagu ku dhegan yahay gurigaaga, hawada garaashka waxay ku mari kartaa albaabka laga galo aagga aad degan tahay. Albaabka garaashka oo dahaaran ayaa yareeyn doona u wareejinta hawada dibadda iyo gudaha.
(2) Haddii aad garaashkaaga uga dhigto aqoon isweydaarsi, raaxadaadu waxay noqon doontaa mudnaanta koowaad. Albaabka garaashka oo dahaaran ayaa ka caawin doona inuu heerkulka garaashku ku sii jiro heer kulka cidhiidhiga ah marka la barbar dhigo baaxadda heer kul ee ka baxsan.
(3) Haddii garaashkaagu ka hooseeyo qol kale oo gurigaaga ka mid ah, hawadu waxay mari kartaa saqafka garaashka illaa dabaqa qolka kore. Albaab dabool leh ayaa heerkulka garaashka ku ilaalin doona xasilloon si loo yareeyo isbedbedelka heerkulka qolka kore.
(4) Albaabka garaashka dahaaran guud ahaan waa ka aamusan yahay wuxuuna leeyahay gudaha ka soo jiidasho badan albaabka aan daha lahayn.
Waa maxay R-Value?
R-Value waa cabbir kuleylka kuleylka loo adeegsado dhismaha iyo warshadaha dhismaha. Gaar ahaan, R-value waa iska caabbinta kuleylka ee socodka kuleylka. Soosaarayaal badan ayaa adeegsada qiimeynta 'R-values' si ay u muujiyaan hufnaanta tamarta wax soo saarkooda. Lambarkan waxaa loo xisaabiyaa iyadoo lagu saleynayo dhumucda dahaarka iyo waxyaabaha kiimikada ay ka kooban tahay. Markay sare u kacdo tirada R-qiimaha, ayaa ka sii fiicnaanaya sifooyinka dahaarka maaddada.
Bestar Model 5000 Series Garage Albaabada, oo leh R Value 17.10, oo lagu soo saaray dhismaha 3 lakab (bir + dahaadh + bir), waxay siisaa xoog gaar ah, waxtarka tamarta, caabbinta miridhku iyo yareynta buuqa. Dhumucda 2 ”ee dahaarka polyurethane iyo caag birjirka kuleylka ayaa albaabbadaas ka dhigaya kuleyl iyo qabow adkaysi leh, halka wadajirka carrabka iyo jeexdinku ka caawinayo xiridda dabaysha, roobka iyo barafka.